हाम्रो राम्रो पक्ष भनेको नै हाइजिन मेन्टेन हो – newslinesnepal
हाम्रो राम्रो पक्ष भनेको नै हाइजिन मेन्टेन हो
बिष्णु भण्डारी,संचालक,वालनट बिष्ट्रो एण्ड बैंकेट
धेरै लामो समयसम्म गैर आवासिय जीवन व्यथित गर्नेहरु मातृभुमीमा आउँदा पनि अक्सर पाहुना बनेर आउने गर्छन्, कतिपयले स्वदेश फर्कने बाटो नै भुल्छन् त कोही आफन्त समेत भुलेर छुट्टै संसार बसाउन पुग्छन् । यसरी विदेशी भुमीको माया मोहमा भुल्नेहरु विदेशको सुखसयल र यश आरामको जिन्दगी परित्याग गर्दै स्वदेशमा नै श्रम, पुँजी र प्रविधी लगाउने गरि भौतिक उपस्थिती जनाउनेहरु शायदै नगण्य संख्यामा होलान् । तिनै मध्येका एक नेपाली हुन बिष्णु भण्डारी । दुई दशक भन्दा पनि लामो समय विदेशी भुमीमा बिताएका भण्डारीले स्वदेश फर्किएर पर्यटन व्यवसाय अन्तर्गत हस्पिटालिटी क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । हाल उनले काठमाडौको महाराजगञ्जमा करिब ५ करोडको लागतमा वालनट बिष्ट्रो एण्ड बैंकेट सञ्चालक गरेका छन् । कुनै बेला गैर आवासिय नेपाली बन्दै विश्वका विभिन्न कुनामा भौतारिएका भण्डारीले आजको दिनमा श्रम र शिपलाई आफ्नै स्वदेशी भुमिमा नै पोखेका मात्र छैनन् कि, साथमा रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना गरेका छन् । दुई दशकको पराई भुमी बसाईलाई विट मार्दै नेपाल फर्किएर स्वदेशमा नै व्यवसाय संचालन गर्दै आएका भण्डारीसँग न्युजलाईन्स्का लागि गरिएको कुराकानीः
यहाँ स्थाई रुपमा बसोबास गर्ने गरि स्वदेश फर्कनु भएको हो ?
म काम गर्ने सिलसिलामा २१ बर्षसम्म विदेशमा रहे,त्यहाँको बसाईलाई बिट मार्दै स्थाई रुपमा नै नेपाल बस्ने सोच बनाएरै आएको छु । अमेरिका जस्तो मुलुकमा बसेता पनि आफ्नो मातृभूमिमा केहि गर्नु पर्छ भनी उद्धेश्यका साथ नेपाल फर्केको छु । पहिले देश अनि मात्र विदेश भन्ने नारालाई मनन् गर्दै नेपालमै केहि गरौं विदेशिएका नेपालीले पनि नेपालमै केहि गर्नुपर्छ आफ्नो श्रम र कर्मलाई नेपालमै सदुपयोग गर्नुपर्छ भनेरै म स्थायी रुपमै नेपाल फर्किएको हुँ ।
सामान्यतया पैसाको मोहमा मानिसहरु विदेशी भुमी मै रम्ने गर्छन् नि,तपाईं किन अपवाद बन्नु भयो ?
यो प्रश्नको उत्तर खोज्न जटिल छ । मानिसहरु रहर भन्दा पनि वाध्यताले विदेशीने गर्छन् । हरेक मानिस अवसरको खोजीमा विदेशिन्छ । विश्वभरमै त्यही ट्रेन्ड छ । तर मेरो स्वदेश फर्काइको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने म पहिल्यैदेखि स्वदेश फर्किने चाह राख्थे । आफ्नै देशमा केही गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता बोक्थे । आफ्नै परिवारको साथमा, साथी संगत र आफन्तजनको नजिकपनलाई खुब मिस गरेको थिएँ । यि र यस्तै कुराहरुले मेरो मन विदेशी भुमिमा रम्न सकेन । त्यसैले प्रि–प्लान बनाएर नेपाल फर्किए ।
स्वदेश फर्कनु अघि कस्तो प्रि –प्लान बनाउनु भयो ?
कामको सिलसिलामा म युरोप र अमेरिका गइरहन्थे ।पछिल्लो समय मेरो बसाई बरमुडामा थियो । म हस्पिटालिटीको क्षेत्रमा भिजेकोले पनि यस क्षेत्रमा राम्रो दख्खल राख्थे । हाईजिन हस्पिटालिटी क्षेत्रको प्रमुख महत्वको बिषय हो । मैले नेपालमा गएर अब हाइजेनिक बेसमा हस्पिटालिटी उद्योगमा लगानी गर्छु । स्वदेश फर्कने मौकाको पर्खाइमा नै रहेकोले मैले क्विक डिसिजन लिए बैंकेट सहितको रेष्टुरेन्ट नै नेपालमा खोल्छु भन्ने सोच लिएर नेपाल फर्किए र सोही प्लान अनुसार काम गरे । करिब पाँच करोड लागतमा वालनट बिष्ट्रो एण्ड बैंकेट सञ्चालनमा ल्यायौं । विदेशबाट ल्याएको पुँजी अपुग भए पछि केही स्वदेशी स्रोत पनि लगानी गरेको छु । त्यही नै हो ।
यहाँले बैंकेट खोलेको केही समय पस्चात नै कोभिडले गर्दा व्यवसाय प्रभावित बन्यो नि होईन ?
हो,गत बर्षको तिहारमा बैंकेटको सफ्ट ओपनिङ गरेका थियौ शुरुवाती समयमा भएपनि बैंकेटले राम्रो व्यापार गरिरहेको थियो । तर चैत्रदेखि कोरोना भाइरसले गर्दा व्यवसाय नै बन्द गर्नु प¥यो । गएको बैशाखमा बैंकेटको फर्मल्ली नै ग्राण्ड ओपनिङ गर्ने योजना बुनेको थिए, कोरोनाले गर्दा त्यो संभव पनि हुन सकेन । अवस्था सामान्य भए पछि गर्ने सोच अझै छ ।
व्यवसाय निर्वाध संचालन गर्ने माहौल नै छैन, कस्ता अप्ठयाराहरु महशुश गर्नु भएको छ ?
हो,कोभिड १९ बाट हस्पिटालिटी क्षेत्र तहस नहस पारेको छ । अझ हाम्रो जस्तो बैकेट क्षेत्र लामो समयसम्म पूर्ण रुपमा प्रभावित बन्न पुग्यो । हाल केही दिन यता बैकेट खोल्न पाएका छैनौं । थोरै भने पनि कारोबार भएको छ । तर ठुलो संख्याको मास ग्यादरिङ्ग वर्जित भएकाले व्यापार पहिलेको तुलनामा निकै कम छ । हाम्रोमा करिब ४० जना स्टाफ हुनुहुन्छ । लामो समयसम्म व्यवसाय नै चल्न नसके उहाँहरुलाई नियमित तलब दिन अप्ठयारो भएको छ । अन्य थुप्रै जटिलताहरु महशुश गरेका छौ । भनेर साध्य छैन । हाल सारा विश्व नै महामारीको चपेटामा छ,सारा विश्व भरिको अवस्था नै प्रतिकुल छ । त्यसैले चित्त बुझाउनुको विकल्प पनि छैन ।
अन्त्यमा,वालनट बैकेटको बिशेषता बारे केही प्रकाश पारिदिनुस् न ?
हाम्रो राम्रो पक्ष भनेको नै हाइजिन मेन्टेन हो। त्यसो त स्वस्थ्यकर परिकारलाई रिजनेबल मूल्यमा क्वालिटी कमिटमेन्ट सहित सर्भिस डेलिभरी गर्ने प्रमुख लक्ष्य अनुरुप हामी अघि बढेका छौ । अतिथी सत्कार र हार्दिकतामा हामीले उस्तै जोड दिएका छौ भने कोभिड पस्चात हाम्रा स्टाफ र ग्राहक महानुभावहरुको स्वास्थ्य सुरक्षाका चासो पनि हाम्रो प्राथमिकताको सुचीमा छ । हामीले ग्राहकले निसन्देह सेवा प्राप्त गर्न पाउनु पर्छ भन्ने मान्यता बोक्ने भएकाले पनि हामी तुलनात्मक रुपमा बिशेष छौ । त्यस्तै परिकारको सवालमा कुरा गर्नु पर्दा हामीले बिशुद्ध नेपाली लोकल खानाको संरक्षण गर्ने, स्वदेशी बिदेशी ग्राहकहरुमाझ नेपाली खानाको प्रर्वधन गर्ने निती लिएका छौ । हामी पिज्जा, बर्गर भन्दा हाम्रै नेपाली खानालाई प्रबर्धन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता अनुरुप अघि बढेका छौ । अहिले यो महामारीको बिचमा पनि लकडाउन खुकुलो भए यता हामीले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड र नेपाल सरकारको सुरक्षा नीतिलाई लागु गर्दै व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छौं । अन्तमा सम्पूर्ण नेपालीहरुमा हाम्रो वालनट बिष्ट्रो एण्ड बैंकेट परिवारको तर्फबाट विजया दशमीको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं ।